Loolan ka dhex billowday Maareeye iyo Goodaax iyo warqad uu soo saaray wasiir Maareeye – Hornafrik Media Network
Loolan xoog leh ayaa ka dhex qarxay wasiirka waxbarashada, hiddaha iyo tacliinta sare Cabdullaahi Goodax Barre, iyo wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Maxamed Cabdi Xayir Mareeye, waxayna isku hayaan awoodda labada wasaaradood.
Wasiirka Maareeye ayaa qoraal uu maanta soo saaray ku gacan seeray wax kama jiraanna ku tilmaamay Guddiga Waxbarashada, Dhaqanka iyo Seyniska oo isla maanta uu dhisay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre.
Qoraalka ayaa intaas ku daray “Sida uu yahay Mandate-ka wasaaradaha ee kala duwan, wasaaradda waxbarashadu wax shuqul ah kuma laha dhaqanka, waa masuuliyad ay leedahay Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska.”
Sidaas awgeed, ayaa lagu yiri qoraalka Maareeye, “waxaanu cadeynaynaa in gudigaas ay wasaaradda waxbarashadu maanta ku dhawaaqday yahay guddi baalmarsan nidaamka loo dhiso gudigan oo kale oo aanu sharci ahayn, isla markaana meteli karin bahda dhaqanka iyo warfaafinta ee Soomaaliya.”
Maareeye ayaa ugu dambeyn sheegay in dhowaan wasaaraddiisu billaabi doonto “dhismaha guddi qaran oo si hufan loo dhisay ayna ku mideysan yihiin dhammaan hay’adaha dawladda iyo kuwa bulshada ee doorka ku leh.”
Hoos ka aqriso qoraalka wasiir Maareeyee.
Dowladda Soomaaliya oo ciidamo u direysa beelaha ku dagaalamaya Mudug